Aostralia - Mag tsy mampino
Tombony 4 lehibe azonao raisina amin'ny serivisy fanadiovana varotra
Mety nanangana birao mijery madio ianao fa tsy misy fikojakojana mety dia ho very ny biraonao. Tsy izany ihany fa ny tsy fisian'ny fanadiovana dia mety hiteraka toe-javatra mampalahelo. Isaky ny indray mandeha isan-taona ny biraonao dia mitaky…
Famelomana ny fianakaviana ivelan'ny fianakaviana aostralianina
Jolay 5, 2017
Raha ianao sy ny fianakavianao dia handeha lavitra any amin'ny toerana atsy ho atsy, dia tsy isalasalana fa hanao dia mandritra ny androm-piainana ianao. Tena tsy misy toy ny any ivelany sy ny kilaometany an'efitra, ny velaran-tany samihafa ary ny lanitra misokatra…
Africa/Asia/Aostralia/Eoropa/Holidays/Amerika/S. America/Travel/Travel Guides/Hevitra fitsangatsanganana
Rindrambaiko BPM: Ny tombony sy tsiambaratelon'ny fampiharana mora
by Rindrambaiko BPM
Ireo fikambanana mifantoka amin'ny mpanjifany, manana fotoana bebe kokoa hisongadina amin'ny tsena maoderina. Tena zava-dehibe ho azy ireo ny mijery manokana ny tahan'ny fahafaham-po ny mpanjifa, ny filan'ny mpanjifa sy ny safidiny, ny hafainganan'ny serivisy sy ny fanaterana ny vokatra, ary ny lafiny hafa amin'ny…
Ny zavatra tsy hay hadinoina indrindra tokony hatao sy jerena rehefa mitsidika an'i Brisbane ianao
by Jelena D.
Oktobra 31, 2016
Brisbane, renivohitr'i Queensland, dia tanàna mavitrika misy toerana fizahan-tany miavaka maro. Tanànan'ny renirano izy io miaraka amina fahitana sarany mamirapiratra, fiainana amin'ny alina mampientam-po, sehatra zavakanto miroborobo, toerana misy ny bibidia miavaka, làlana fitsangantsanganana mahafinaritra ary lalan-bisikileta ary koa trano fisakafoanana tsara sy…
Karazan-tsakafo inona avy no tian'ny olona any Aostralia
Oktobra 29, 2016
Ny pie hena dia mitohy ny sakafo ankafizin'i Aostralia. Ny pie hena dia novain'ny orinasan-tsakafo fihinanam-be any amin'ny faritra lasa endrika sakafo nasionaly. Nantsoina hoe "The Pie Floater;" pie mitsingevana eo am-pandriana lasopy pea miaraka amin'ny…
Mandinika ireo fahitana any Ballarat
Septambra 28, 2016
Ballarat dia tanàna iray izay eo amin'ny lemaka ambany andrefana akaikin'ny reniranon'i Yarrowee an'ny Great Dividing Range. Ity faritra ity dia ao amin'ny fanjakan'ny Victoria. Sahabo ho 105 kilometatra andrefan'ny avaratra andrefan'ny Melbourne ny tanàna. Raha mandeha miaraka…
Tsingerintaona tsy hay hadinoina tamin'ny fitsangantsanganana an-tsambo: Inona no ilaina mba hahatanteraka ny nofinao?
Jolay 19, 2016
Amin'ity taona ity dia mankanesa any am-pitoerana ianao amin'ny fankalazana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahanao tamin'ny fitsangantsanganana an-tsambo. Tsy misy antony tokony tsy hanomezanao fanomezana mahafinaritra toy izany miaraka amin'ny fianakavianao, ny namanao ary ny mpiara-miasa aminao. Tena niasa mafy ianao…
Aiza no aleha ary inona no hatao any Aostralia
Jona 22, 2016
Voahodidin'ny Ranomasimbe Indianina sy ny Pasifika, Aostralia, ny kely indrindra amin'ny kaontinanta dia mamelatra ny toetra majika amin'ny enigma tanteraka. Miaraka amin'ny firoboroboan'ny zava-manintona i Aostralia dia miantso ireo mpizahatany avy amin'ny vazan-tany samihafa. Ity no nomanin'i Aostralia ho anao. Tsy maintsy mitsidika toerana…
Aostralia/Eoropa/S. America/Travel/Hevitra fitsangatsanganana
Ahoana no iankinan'ny toeran ny fialan-tsasatra amin'ny toerana onenanao?
Rehefa mieritreritra ny toerana tiako aleha fialan-tsasatra aho dia manonofy any lavitra any. Toerana hafakely tsy mbola hitako tany aloha, miaraka amin'ny toerana mahafinaritra sy kolontsaina vaovao manaitaitra hiaina. Fa rehefa tonga ny fotoana handaminana ny…
Ny fiainana any Sydney Mahagaga
Febroary 9, 2016
Ny fitsidihana an'i Sydney dia mihoatra ny hoe tonga fotsiny ho an'ny Opera House ary mitsangantsangana mamaky ny Harbor. Betsaka ny zavatra hita, fa raha tsy mahay mifikitra mandritra ny alina ihany koa ianao. Tsarovy fa ity tanàna ity dia vilany fandrendrehana ho an'ny…